स्वाइनफ्लु लाग्नबाट कसरी बच्ने? | Mirmee.com
स्वाइनफ्लु लाग्नबाट कसरी बच्ने?
Mirmee Reporter-BN August 6, 2017 Leaveacomment
स्वाइनफ्लु सरुवा रोग हो। यो एक स्थानबाट अर्को स्थानमा चाँडै फैलन सक्छ। त्यसैले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सरकारको इपिडिमियोलोजी रोग महाशाखाले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वाइनफ्लु भाइरस फैलिएकाले सबैलाई सचेत हुन विशेष आग्रह गरेको छ।
मिर्मी नजिकको र दैनिक यातायातमा अोहोर-दोहोर हुने स्याङजाको वालिङमा १८४३ जनाको जाँच गर्दा ६२८ जनामा रुघाखोकी र सय जनामा जाँच गर्दा ४० जनामा उच्च ज्वरो देखिएको छ। वालिङमा स्वाइनफ्लुको महामारी फैलन सक्ने भन्दै सरकारी डाक्टर टोली त्यहाँ औषधिसहित पुगगेको महाशाखाका निर्देशक भीम आचार्यले बताएका छन्। अन्य ठाउँबाट जानकारी नआइसकेको उनले बताए।
अहिलेसम्म ६ जनाको मृत्यु र २०२ जनामा स्वाइनफ्लु देखिएको आचार्य बताउँछन्। यो संख्या बढ्दै जान सक्ने उनले सचेत गराएका छन्।
कसरी बच्ने? उपचार:
निर्देशक आचार्यका अनुसार ‘टमिफ्लु’ नामक भ्याक्सिन लगाएमा एचवानएनवान नामक भाइरसले शरीरमा संक्रमण गर्दैन। यो १ वर्षसम्मको लागि हुन्छ। एक डोजको लागि १२ सय पर्ने भएकाले अनावश्यक मानिसले भ्याक्सिन नलगाउँदा पनि केही नहुने आचार्य बताउँछन्।
आचार्यका अनुसार स्वाइनफ्लु भइसकेपछि स्वासप्रस्वास बन्द हुने, शरिरका अंगहरु फेल हुने, पाचन प्रणालीले काम नगर्ने र अचेत हुने जस्ता जटिल अवस्था देखा पर्छ। त्यसैले रुघाखोकी र ज्वरो मात्र आएमा पनि स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
सन्२००९ बाट स्वाईन फ्लू महामारीको रुप लिएको पाईन्छ। बार्षिकरुपमा swine flu vaccine लिएमा यसको रिस्कबाट बच्न सकिन्छ। सुंगुरमा लाग्ने यो रोग २००९ बाट मान्छेमा समेत भेटिएको हो। यो सरुवा रोग भएकाले रोगलागेको मान्छे मान्छेको हुलमा नजाने, उपचार गर्ने र सके सम्म साधारण रुघा लागे पनि चेक गराउने गरौं।
Tagged Kaligandaki, mirmee, swine flu in Syangja, waling
← सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने मुक्तिनाथ विकास बैंक
मिर्मीमा युवा भेलाले के निर्णय गर्‍यो? पढ्नुहोस । →